'सीमा समस्या होइन, सिंहदरवार हो'
आईतबार, जेठ ४, २०७७ सारङ्गी न्युज
मोहन देव बिष्ट
सीमा समस्या होइन, सिंहदरवार हो। सबै आम नेपाली जनसमुदायले बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक बुझिदिन आग्रह गर्दछु ।इतिहास जहिले पनि सतिसाल जस्तो अट्ल अब्बल र जे हो त्यही बनेर रहिरहने सत्यतथ्य घटनाको सक्कली रुप वा स्वरूप हो । राम्रो सत्य इतिहास वा नराम्रो असत्य इतिहास बन्न्ने क्रममा निकै छ्लछाम झालझेल ठेलठाल पेलपाल हुन्छ्न । इतिहासकै पाना पल्टाउदा कुनै देशमा आफ्नै जनता र राष्ट्रियता मातृभूमी प्रति ठूलो गद्द्दारी गरेको पाइन्छ । कुनै देशमा आफ्ना नागरिक लाई सेवा सुबिधा अधिकार दिन आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएको पढन पाइन्छ । ठुला ठुला युद्ध तार्किक छलफल गम्भीर बहस हुन्छ्न ।
हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न कालखण्डमा उतारचढाव उथलपुथल हुने गरि समाजमा क्रान्ति भएका छन । तर हाम्रो सिमा बिबाद को बिषय आज निकै चर्को रुपमा काठमाडौका गल्लि गल्लि चोकचोक र बिश्वब्यापी मोबाइल मा देख्न पढन सुन्न पाइन्छ । तर हाम्रो देशको सिमाको गम्भीरता र सिहदरवार बिचको दुरी मनोवृत्ति के हो ? यो बिषय मा धेरै कम नागरिकको ध्यान जान्छ ।
खास गरी पृथ्वीनारायण शाहको शासन सत्ता पहिले नेपालको भूगोल र पृथ्वीनारायण शाह को नेतृत्वमा तन्केको बिशाल हाम्रो नेपाल त्यसपछी भारती बिस्तारवाद को गिद्दे नजर र आन्तरिक दिल्लीका दलाल हरुका कारणले विशाल हाम्रो मातृभूमी पुर्वमा टिष्टानदि सम्म र पश्चिम किल्लाककडा कुमाउ गडवाल सम्म को उहिलेको विशाल नेपाल हाल आएर मेचीमहाकाली मा सिमित हुन पुग्यो । यस्को भित्री राज के होला ??
समस्या सिमाको होइन समस्या सिँहदरवारका शासकको नियतमा हो । बिषय अलि गम्भीर छ । इतिहासका पाना पल्टाएर हेर्दा सिमाको समस्या भन्दा भारतीय बिस्तारबादको हस्तक्षेप सगै हाम्रा नेताहरु कहिले प्रलोभनमा परेर शिर झुक्यो ।कहिले आपूर्ति ढुवानीको डर देखाएर हाम्रो नेतृत्व झुक्यो । कहिले भारतीय गल्लत बिचार र चतुर्याइँको शिकार भएर नेपाली शिर झुक्यो हाम्रो स्वाभिमान मा ठूलो चोट पर्यो बिश्वास मा कुठाराघात भयो । सिमा मिचियो नदि नला लिलामी भए ।सन्धि सम्झौता को डर र आडम्बर देखाइयो ।हस्तक्षेप र मिच्ने काम यति सम्म भयो कि हाम्रो एक यस्तो समुदाय छ त्यसैको काधमा टेकेर भारतीय बिस्तारवाद अहिले पनि आफ्नो बिस्तारबादको रजाइ गरि रहन्छ । हाम्रो स्वाभिमान माथी हस्तक्षेप र मातृभूमि लाई मिचिरहन्छ ।
त्यो बैधानिक्ता लाई 1950 का असमान सन्धिले भारतलाई भरपुर मद्दत गरेको देखिन्छ । हामी स्वाभिमानी नेपाली लाई जहिल्यै दुखिरहन्छ । हामी बोली रहन्छौ । उ सुनिरहन्छ र भारत हासी हासी नाका थुनिरहन्छ । सिंहरदरवारलाई दिल्लीको सन्देशले झस्काइ दिन्छ । दिल्लीको सन्देश लाजिम्पाटको हुलाकी मार्फत सिधै बालुवाटार पुग्छ । दिल्लीका लागि नेपालका कुनै ढोका बन्द छैन । हस्तक्षेपको नमूना कहिले सिमा तिर मात्रै देखिन्छ तर जरा सिहदरवार बालुवाटार सर्बोच्चअदालत प्रहरी र सैनिक अड्डा सम्मा सहजै पहुँच राख्छ दिल्ली ।
यहाँ सम्म कि भारतका सिमावर्ती जिल्लामा कुन अधिकारी प्रमुख भएर जाने कहिले लाजिम्पाट ले निर्णय गर्छ । यो कुरा सिहदरवार का शासनमा आसिन नेतामहासय ज्यू हरुलाइ राम्रो शीत थाहा छ । नेपाल मा नाका बन्दी गर्न नेपाली लाई उचाली दिन्छ । नेपालमा राष्ट्रबादी नेता बनाउन समेत भारतीयलाई गाली गर्ने सल्लाह समेतदिन पछि पर्दैन भारत त्यसैले सल्लाह पनि भारु मै दिएको ले चुक्ताको हिसाब किताब पनि भारु मै सिहदरवार भित्र छिरीसकेपछी बुझाउनु पर्छ ।अहिलेसम्म को घटना क्रमले त्यही देखाउछ ।
सिहदरवार पुगेपछी नेपाली नेताहरुको दुई खालको राष्ट्रियता देखिन्छ । एक थरी नेपाली नेताहरुमा भारतको चाकरी गुलामीमा नै आफ्नो र देशको बिश्व र ब्यक्तिगत राजनीति जीवन सफलता हुने भावना देखिन्छ । अर्का थरी नेताहरुमा नेपाल कै जनताको जगमा आफ्नो राजनीति भबिस्य देख्छन नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने नेताहरुले दिल्ली को नुनखाएका गद्दारहरुको सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । यो सबै भन्दा नेपालीका लागि दु:खद क्षण हुन पुग्छ एक सानो उदाहरण
जति बेला नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । त्यो बेला भारतीयका सबै हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नु पर्छ भनी । पशुपतिनाथ मन्दिरमा नेपाली नै पुजारी राखौ र भारतिय बिस्तारबादको हर क्षेत्रको हस्तक्षेप अन्त्यको सुरुवाद गरौ भन्दा दिल्लीको नुन खाने हरुले त्यो सफल हुन दिएन बरु चौतर्फी गलत अफवाह फैलाएर राष्ट्रपति लाई असंबैधानिक कदम चाल्न प्रोत्साहन गरे उचाले गलत भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरे र सरकार नै गिराए । त्यसैले भारतले नेपाली नेता हरुलाइ कसरी चलाउने भन्ने राम्रो शीत ज्ञान हासिल गरेको छ । जनताले जति सुखै सडकमा सिमा बिबादको बिषय उठाए पनि सिहदरवार मा सबै नेताले देश र जनता प्रती उत्तरदायी भएर अति सार्वजनिक महत्त्वको बिषयमा सङ्कल्प नगरे सम्म सिमा बिबाद समाधन र भारतीय हस्तक्षेप अहिले अन्त्य हुने देखिदैन टालटुल गरेर समाधान हुदैन ।
त्यसैले सिमा आफैमा समस्या होइन सिहदरवार नै समस्या हो असमान सन्धि सम्झौता बिबादका मुल कारक हुन । देशका सबै नेता आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियता अखण्डताको मामिलामा एक झुट भएर उभिने हो भने । नेपाली जनता ले माइतीघर मन्डलामा आन्दोलन गर्नु पर्दैन । हाम्रो सिमा मातृभूमी भारतीय बिस्तारबादको अतिक्रमणको मुद्दा कहिले जनमानसको सतह सम्म आउने थिएन । जनताले सिमा बिबादको बहस छलफल पीडा उत्पीडन जेल्नु पर्ने थिएन ।
पहिलो नम्बर जो पनि सरकारमा पुग्छ उस्ले समाधान गर्न चाहादैन किन कि अर्को चुनावको लागि नारा चाहिन्छ । दोस्रो नम्बर दिल्लीको नुन को सोझो गर्नै पर्छ नत्र । यहि सिमा बिबाद ले कति का सरकार बने कतिका ढ्ले कतिको हत्या गरियो त्यो इतिहासले लेखाजोखा गर्ला तर सिमा आफैमा समस्या होइन चाहे भारतीय हुन या नेपाली जनता भूगोल समस्या होइन सबै भन्दा ठूलो समस्या नेतृत्वको नियतीमा छ । भारतको हस्तक्षेप सिमानामा मात्रै होइन सबै सरकार कार्यालय देखि नाका भन्सार मठमन्दिर अड्डा अदालत सबै क्षेत्रमा छ । त्यसैले आजको बहस भारत बिरोधि भन्दा पनि सबै भन्दा पहिले आफुलाइ नेपाली भन्न्ने तर दिल्लीका दलाल हुने नेपालको भूमी मिचिदा एक शब्द नबोल्ने बोले पनि दिल्ली कै बयान गर्ने हुदा हुँदै बिबादीत हाम्रो भूमी लिजमा दिने कुरा उठाएर बिषय लाई अन्तै मोडने जालजेल गर्ने हरु लाई सिंहदरवार छिर्न बाट रोकै अन्तरबस्तु को सहि पहिचान गरौं ।
सार्वजनिक महत्त्वको सङ्कल्प प्रस्ताव मा हस्तक्षेप गर्न लगाइ अनि भारत शीत बार्ता गराउन दबाब दिउ । यसो गर्दा अहिले हामीले दाबी गरेका सिमा क्षेत्र भन्दा बढी प्राप्त गर्न सक्छौं । बेला बेलामा सिमा बिबादका भारतीय अतिक्रमण का घाउ हरु बल्जिने छैन्न । 1950 का असमान सन्धि सम्झौताको अन्त्य गरि समान र असल छिमिकी को रुपमा ब्यापार सन्धि गर्न आवश्यक छ । बिषय माटो को भूगोल को मात्रै होइन यँहाका दिल्लीका दलाल र लम्पसार आन्तरिकबादी को भन्डाफोर पनि हो ।
आईतबार, जेठ ४, २०७७, १०:०५:००
#ब्याक अफ इन्डिया